မြန်မာကီးဘုတ် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မြန်မာကီးဘုတ်. Show all posts
Bagan Keyboard လှလှလေး သုံးချင်တယ် ဆိုရင်
ကဲ ... ဒီတစ်ခါလည်း BaganKeyboard 4.4apk Code နံပတ် ဖြည့်ပြီး သားလေးကို ပြန်လည် မျှဝေ လိုက်ပါတယ်...
ပုဂံ ကီးဘုတ် နှစ်မျိုးပါ စိမ်းပြာရောင်နဲ့ စိမ်းနီရောင်ပါ...မိမိ အသုံးပြု လိုတဲ့ ကီးဘုတ်ကို ဒေါင်းယူ အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်....
အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အရင် ပုဂံ ကီးဘုတ်အား ဖျက်ပြီးမှ install ပြုလုပ်ပါ...
▼ ပြာစိမ်း ပုဂံ ကီးဘုတ် ▼ OR ▼ နီစိမ်း ပုဂံ ကီးဘုတ် ▼
Root အမျိုးမျိုး Myanmar font အမျိုးမျိုး myanmar keyboard အမျိုးမျိုး apk တစ်ခုထဲ အသုံးပြုနိုင်
အရမ်းကောင်းတဲ့ apk လေး ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် root အမျိုးမျိုး Myanmar found အမျိုးမျိုး myanmar keyboard. အမျိုးမျိုး မြန်မာစာ မမှန်လို့ ပြင် ချင်လား မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက် တာတွေ root နဲ့ ပတ်သက် တာတွေ ဒီ အထဲမှာ အကုန် ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အရမ်း good တယ်ဗျာ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 26, 20153comments:
ကဏ္ဍ Android, Keyboard, Phone Application, Root, မြန်မာကီးဘုတ်, မြန်မာဖေါင့်
Android အတွက် MyatMin Key Myanmar Keyboard အသစ် ထွက်
Android အတွက် မြန်မာ ကီးဘုတ် အသစ် လေးပါ။ သုံးရတာ ရိုးရှင်းပြီး လွယ်အောင် ပြုလုပ် ထားပါတယ်။ smart zawgyi တော့ ပါဝင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ smart zawgyi ပါဝင် တဲ့ pro version ကို ရောင်းချ ပေးမှာပါ။ အသုံး ပြုချင်တယ် ဆိုရင် Google Play မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင် ပါတယ်။
MyatMin Key - Myanmar Keyboard isasoft keyboard for Android devices with simple iOS UI. You can download it for free from Google Play. Pro version with smart zawgyi features may available later.
- Added 'ဈ'
Updated : March 20, 2015
Installs : 50 - 100
▼ play.google.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 22, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, မြန်မာကီးဘုတ်
Bagan Keyboard 5.9 APK Size ( 8.6MB )
ဖုန်းမှာ သုံးရတာ အကောင်းဆုံး - Bagan Keyboard 5.9 APK Size(-8.6MB-) လေးပါ။
ဘော်ဒါ တစ်ယောက် တောင်း ထားလို့ အသုံးဝင် တဲ့ဘော်ဒါတွေ အတွက်ပါ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အသုံး လိုရင်တော့ အောက်မှာ Bagan Keyboard 5.9 APK လေးကို ဒေါင်းပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
From : မောင်ပေါက် ( Maung Pauk ) by Paye PhyoKyaw
Sony Xperia T3 D5103 , Build number 18.1.A.2.25 ကို Root ပြုလုပ်နည်း + မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနည်း
Sony Xperia T3 D5103 , Build number : 18.1.A.2.25 ကို Root ဖေါက်ဖို့ အခက် အခဲ ဖြစ်နေ တဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် နည်းလမ်း လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်....
ဒီ Model ကတော့ Flashtool နဲ့ Flash ပေးရတာပါ..
(အမှားအယွင်း မဖြစ်စေဖို့ ရေးထားသည့်အတိုင်း တိကျ သေချာအောင် လုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်)
ပထမဆုံး ဖုန်းမှ USB Debugging ကို On ထားပေးပါ...
RootkitXperia_20140719.zip နဲ့ Kernels.zip ကို ဒေါင်းယူပြီး Desktop ပေါ်မှာ Zip ဖြည်ထားပါ..။
▼ RootkitXperia_20140719.zip ▼ OR ▼ Kernels.zip ▼
Kernels.zip ဖိုလ်ဒါထဲမှ ftf ဖိုင်လ် နှစ်ခု စလုံးကို Copy ကူးပြီး C: > Flashtool > firmwares သို့ ကူးထည့်ပါ..
ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ..
C: > Flashtool > Flashtool64 ကို Run ပါ...
Root ဖေါက်နိုင်ဖို့ အတွက် Kernel 18.1.a.1.14 ကို အရင်ဆုံး Flash ပေးရပါမယ်...
အောက်ပါ ပုံများမှ နံပါတ် အစဉ်အတိုင်း နှိပ်သွားပါ..
အပေါ်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီဆိုလျှင်..
Power ပိတ်ထားတဲ့ ဖုန်းမှ Vol Down ခလုတ် ကို နှိပ်ထားလျှက် USB ကြိုးနှင့် ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါ..
ပြီးလျှင် ဖုန်းကို Power ပြန်ဖွင့်ပေး လိုက်ပါ...
Display မှာ ဘာမှမမြင်တွေ့ ရပဲ (အမည်းရောင်နှင့်) ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်...(စိတ် မပူပါနှင့်)
ဖုန်းမှာ ဘာမှ မမြင်တွေ့ရပေမဲ့ ဖုန်းက အလုပ် လုပ်နေပါတယ်...
ခဏနေလို့ ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ သိသွားပြီဆိုလျှင် Desktop ပေါ်က RootkitXperia > install ကို Run ပြီး Root ဖေါက်ပေးလိုက်ပါ.... သူ့ ဖာသာသူ အလုပ် လုပ်နေပါလိမ့်မယ်.... ပြီးတဲ့ အထိစောင့်ပါ..။
Display မှာ ဘာမှ မမြင်တွေ့ ရတဲ့ ဖုန်းကို Shutdown ချပေး ရပါမယ်....
Shutdown ချပေးဖို့ အတွက် ကတော့....
Power ခလုတ် နှင့် Vol+ ကို တစ်ပြိုင်ထဲ တွဲနှိပ်ထားပါ... Vibrate (၃) ကြိမ် ဆက်တိုက် တုန်ခါသွားပြီဆိုလျှင် Shutdown ကျသွားပါပြီ...
ဖုန်းကို ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ....
အပေါ်က Kernel 18.1.a.1.14 ကို Flash သည့် နည်းအတိုင်း Kernel 18.1.a.2.25 ကို ပြန် Flash ပေးရ ပါမယ်...
Vol Down ခလုတ် ကို နှိပ်ထားလျှက် USB ကြိုးနှင့် ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ...
(ပုံ-၃) မှာ 18.1.a.2.25 ကို သေချာအောင် ရွေးပေးပါ...
ပြီးသွားလျှင် ဖုန်းကို USB ကြိုးမှ ဖြုတ်ပြီး Power ပြန်ဖွင့် လိုက်ပါ..
အောက်ကပုံ အတိုင်း SuperSU လေးနဲ့ ဆို Root ပေါက်သွားပါပြီ...
မြန်မာစာအတွက် MMSD Sony Zawgyi.apk နှင့် အလွယ်တကူထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။
▼ MMSD Sony Zawgyi.apk ▼
စာရေးဖို့ ကီးဘုတ်ကိုတော့ Bagan Keyboard.apk ကို ဒေါင်းယူ ထည့်သွင်းပေးန်ိုင်ပါတယ်..။
▼ Download Bagan Keyboard.apk ▼
ကိုယ်တိုင် အချိန်ပေးပြီး စမ်းသပ်ထားတာမို့ လုံးဝ အဆင်ပြေကြောင်း အာမခံပါတယ်...:)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 07, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Root, Sony, မြန်မာကီးဘုတ်, မြန်မာဖေါင့်